သိပ္ပံ | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London | Page 2
Tag Archives: သိပ္ပံ
Posted on April 7, 2015 by chitnge
သိပ္ပံဒဿနနှင့်အနှစ်သာရများ (၀၂) နယူတန်က ပြောခဲ့ဖူးတယ် – ( .. .. I do not know how I may appear to the world, but to myself I seem to have been only likeaboy, playing on the sea shore, and diverting myself, in … Continue reading →
Posted in Articles	| Tagged နယူတန်​, သိပ္ပံ	| Leaveacomment
Posted on April 5, 2015 by chitnge
သိပ္ပံဒဿနနှင့်အနှစ်သာရများ (၀၁) သိပ္ပံ၌ အနှစ်သာရရှိသည်။ ဒဿနပညာ၌လည်း အနှစ်သာရရှိသည်။ သိပ္ပံဒဿန ပေါင်းလိုက်သောအခါ ပို၍အနှစ်သာရရှိသည်။ အချို့က သိပ္ပံဒဿန ရှိကြောင်းကို မသိကြချေ။ ဒဿနပညာကို ၀ိဇ္ဇာပညာတစ်ခုခုသာ သတ်မှတ်ကြသည်။ သို့သော် ထိုဝိဇ္ဇာပညာရပ် ဒဿနပညာရပ်ထဲ၌ သိပ္ပံဒဿန ရှိသည်ကို အတွင်းကျကျ လေ့လာသူများ မှသာလျှင် သိကြသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များကလည်း ဒဿနပညာကို စိတ်ဝင်စားကြသည်။ ဒဿနပညာရှင်များကလည်း သိပ္ပံပညာကို လေးစားသည်။ နှစ်ခုပေါင်းစုံမိသောအခါ လွန်စွာအဖိုးတန်လာသည်။ အမှန်တော့မူ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ရှာဖွေကြသည်၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များကို ပြန်လည်ရှင်းလင်း ထုတ်ဖော်ရာ၌ ဒဿနပညာကို … Continue reading →
Posted in Articles	| Tagged Philosophy, သိပ္ပံ	| Leaveacomment
Posted on August 8, 2014 by chitnge
သိပ္ပံပညာတိုးတက်လာခဲ့ပုံ သိပ္ပံပညာ တိုးတက်လာခဲ့ပုံကို ဆန်းစစ်လျှင် တစ်ချိန်က အစုလိုက် အပြုံလိုက် သုတေသနလုပ်ရာမှ အဖြေများကို ညှိနှိုင်းရင်း တိုးတက်လာသည်ဟု ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။ သိပ္ပံပညာရပ်သည် တစ်ချိန်က အုပ်စုဖွဲ့၍ အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ ရူပဗေဒတွင် နှိုင်းရသီအိုရီနှင့် ကွမ်တမ်သီအိုရီတို့တွင် နိုင်းရသီအိုရီသည် အိုင်းစတိုင်း တစ်ဦးတည်း ကြိုးစားလုပ်ဆောင် ခဲ့သည်။ ကွမ်တမ်သီအိုရီမှာမူ အုပ်စုဖွဲ့၍ ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင် ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင်မူ Tags: Myanmar Posts, သိပ္ပံ
Posted in Buddhism	| Tagged Myanmar Posts, သိပ္ပံ	| Leaveacomment
Posted on May 31, 2014 by chitnge
စိတ်ချရခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာ အရာရာ စိတ်ချရခြင်းသည် လွန်စွာအဖိုးတန်သည်။ နက်ရှိုင်းမှုလည်း ရှိသည်။ စိတ်ချရအောင်မလုပ်ဘဲ ဖြစ်သလိုလုပ်ခြင်းကြောင့် စိတ်မချရခြင်း ဖြစ်တတ်သကဲ့သို့၊ စိတ်ချရအောင်လုပ်ရင်းနှင့်ပင် စိတ်မချရသော အခြေအနေသို့ ရောက်တတ်သည်။ ထို့ကြောင့် စိတ်ချရခြင်းသည် လွန်စွာအရေးကြီးသည်။ ဝိပဿနာ၌ အသေစိတ်ချရခြင်း ဟူသောစကားရှိသည်။ စာရေးသူသည် ဝိပဿနာ ကျင့်ခဲ့သည်။ အသေစိတ်ချရသည် ဆိုသည်မှာ လွယ်သော ကိစ္စမဟုတ်ချေ။ ထို့အတူ အားလုံးသော ကိစ္စများ စိတ်ချရသည် ဆိုသည်မှာ လွယ်ကူသည်တော့ မဟုတ်ချေ။ ယခု ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများတွင် ပထမပိုင်း၌ မိမိ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged ၀ိပဿနာ, Myanmar Posts, သိပ္ပံ	| Leaveacomment
Posted on March 2, 2014 by chitnge
ဟော့ကင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဟော့ကင်း၏လေးစားစရာအချက်အလက်များ ဟော့ကင်းသည် သူ၏ The Universe inaNutshell ဆိုသော နာမည်ကြီးစာအုပ် ရှေ့ပိုင်းတွင် We shall increase in complexity, if not in depth and shall always be the center of an expanding horizon of possibilities. (THE UNIVERSE IN A … Continue reading →
Posted in Articles	| Tagged Myanmar Posts, သိပ္ပံ, ဟော့ကင်း	| Leaveacomment
Posted on June 13, 2013 by chitnge
အကြောင်းအကျိုးပညာ(၁) အကြောင်းအကျိုးပညာကို သိပ္ပံက လက်ခံသည်။ အကြောင်းအကျိုးပညာနှင့်ပင် သိပ္ပံသည် ထင်ပေါ်ကျော်ဇောလာသည်။ အကြောင်းအကျိုးပညာဖြင့် လူသားအသုံးချ ပစ္စည်းများအား ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် သိပ္ပံသည် လူသားများအဖို့ ရေပန်းစားစရာ ဘာသာရပ် ဖြစ်လာသည်။ ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ် ပညာရပ်၌ မသေချာခြင်း နိယာမ ပေါ်ထွန်းလာသောအခါ – နိုဘလ်ဆုရ မက်(စ)ဘွန်းက – “ကျွန်တော်တို့ သိပ္ပံပညာရပ်သည် အကြောင်းအကျိုးကို လက်ခံပါသည်။ အကယ်၍ သိပ္ပံပညာရပ်သည် အကြောင်းအကျိုးပညာရပ်ကို လက်မခံပါဟု ဆိုလျှင်၊ ကျွန်တော်တို့ သိပ္ပံပညာရပ်သည် Tags: Buddhism … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts, သိပ္ပံ	| Leaveacomment